‘अम्बरे’ को कामुक आइटम डान्स, सबैलाई ‘नाच्ने नचाउने’ रियाको यस्तो रोमान्स ! « Mazzako Online
‘अम्बरे’ को कामुक आइटम डान्स, सबैलाई ‘नाच्ने नचाउने’ रियाको यस्तो रोमान्स !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौ, कार्तिक २६–
मंसिर ०५ गतेबाट सार्वजनिक प्रदशर्नमा आउन लागेको फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ को आईटम गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘नाच्ने नचाउने’ बोलको उक्त गीतमा रिया श्रेष्ठको कामुक नृत्य देख्न सकिन्छ ।
शिव विकको नृत्य निर्देशन रहेको उक्त गीतमा सौगात मल्ल लगायतका कलाकारलाई समेत देख्न सकिन्छ । बाबु बोगटीको संगीत रहेको उक्त गीतमा सरिता वलि र रत्न सुब्वाले स्वर दिएका छन् ।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको ‘श्री ५ अम्बरे’ मा समावेश ‘यो मनमा हमेशा’ बोलको गीत बजारमा यतिबेला हिट छ । जिवनसाथी फिल्मस्को व्यानरमा निर्मित फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ मा सौगात मल्ल, केकी अधिकारी, प्रियंका कार्की, बिक्रम सिंह, सिर्जना अधिकारी, यमबुद्ध, दिवाज राई , मार्टिन खान, राज गदाईली आदी कलाकारहरुको अभिनयलाई देख्न सकिन्छ ।
फिल्म ‘श्री ५ अम्बरे’ मा कृष्णहरि बराल, कालीप्रसाद बाँस्कोटा, यम बुद्ध लगायतले गीत रचना गरेका छन् भने बसन्त सापकोटा, कालीप्रसाद बाँस्कोटा, बाबु बोगटी, तथा यम बुद्धले संगीत सृजना गरेका छन् । फिल्ममा शिव परियार, यम बुद्ध, मिलन अमात्य, प्रह्लाद तिमल्सेना, सरिता वली, सनुप पौडेल र रत्न सुब्बा आदीले स्वरलाई सुन्न सकिन्छ । पाश्र्व संगीत विनोद कुमार भुजेलको रहेको छ भने विनय अधिकारीले साउण्ड डिजाइन गरेका छन् ।
चन्दन दत्तको सम्पादन रहेको चलचित्रलाई गणेश श्रेष्ठले छायाँकन गरेका हुन । टिएन आचार्य र दिपक आचार्य ‘श्री ५ अम्बरे’ का निर्माता हुन् । अभिमन्यू निरवी को लेखन रहेको यो फिल्मलाई डिजिटल सिनेमा नेपालले वितरणको जिम्मा लिएको छ ।